Abakhiqizi nabaphakeli base China Fithem ks-016 Wireless stereo neckband bluetooth Chip 5.0 ezemidlalo nabathengisi | Kaiwansi
I-Fithem ks-016 i-wireless stereo neckband bluetooth Chip 5.0 headphone yezemidlalo
Ukuzijabulisa okungenantambo okungasindi futhi okuphathekayo. I-Neckband wireless bluetooth headset grade waterproof IPx5 chip QCC3003 / 3024 noma i-BK3266 amabhethri amabili angenza isikhathi sokudlala sibe side. Siyimboni kanye nenkampani yezohwebo enesitifiketi somkhiqizo njenge-CE nezinye izitifiketi.
1. isingeniso somkhiqizo i-ks-016
Impilo yebhethri eqinile ngokushaja okukodwa i-Magnetic absorption nano yenqaba ukusonga i-Bluetooth 5.0 yokudlulisa ngokushesha umsindo we-3D umsindo nokuzwa ukuzwa Uhlelo lwebhethri olubili lungadlala isikhathi eside, umculo obukwayo othusayo ngaphandle kokulahleka.
2. ks-016 ipharamitha
I-Chipset I-QCC: 3003/3024 BK: 3266
Uphondo ububanzi Ø10MM
Umthamo webhethri 110mAh
Isikhathi sokusetshenziswa 6-8hours
Isikhathi sokushaja 1-1.5amahora
Isikhathi sokulinda 150hours
3. Izici ze-Ks-016 nezinhlelo zokusebenza
Idizayini yangaphambi kokuvama inciphisa izinkinga zokudlidliza, imvamisa ephansi ibucayi, izwi lomuntu lingcono, jabulela ubuhle bomculo Inhlanganisela emangalisayo yemodi yokudlidliza i-carbon fiber + ubuchwepheshe obukhulu be-acoustic, iphinda iqondane namandla kazibuthe nogesi , futhi ibuyise umsindo ogqamile womculo, imvamisa emaphakathi igcwele, imvamisa ephansi iyajiya futhi iyaguquguquka.
4. Imininingwane yomkhiqizo we-Ks-016
I-memory neck hanger iyaguquguquka futhi igobile. Ikhola lenziwe nge-liquid silicone yezokwelapha, ethambile njengesikhumba sengane, efudumele futhi enethezekile, ezinzile futhi ethembekile. Ingakhokhiswa ngemizuzwana futhi inempilo yebhethri eqinile. Yonke inothi icacile futhi imsulwa.
5. Imininingwane ye-bass ecebile, amaza aphakeme amelwe kahle, futhi i-Mezzo ecebile, inhle kakhulu. Ukusebenza okulula kokulawulwa okuphakathi kwenza abasebenzisi bazizwe kulula ukuyisebenzisa, ikhwalithi yomsindo ibuye ibe kwabaphezulu abayi-10 embonini efanayo, ugesi ungu-110mAh ungasakaza ibhethri lamahora ayi-12 futhi uphephe kakhulu, umkhiqizo unezinyathelo ezithile njengewaranti, wamukelekile ukubonisana nokuthenga.
Olandelayo: Isikebhe se-Fithem ks-020 bluetooth wireless earphone boss head Leisure sports headphones
FITHEM KS-017 engenantambo ngebhande le-Bluetooth headp ...
FITHEM KS-015 ngehedfoni attra kazibuthe ...
I-FITHEM KS-010 i-headphone ye-Bluetooth engenantambo ...